admin – Action Media
मुम्बईमा रेलको ठक्करबाट घाइते भएकी नेपाली युवतीको मृत्यु
७ भदौ, काठमाडौं । एक महीनाअघि भारतको मुम्बईमा रेलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी नेपाली एक युवतीको उपचारको क्रममा निधन भएको छ । गत जुलाई २२ मा २२ वर्षीय कालु परियालाई सन्पदा रेलवे स्टेसनमा रेलले ठक्कर दिएको थियो । रेल पर्खदै गर्दा उनको मोवाइल रेलवे ट्रयाकमा खसेको र मोवाइल टिप्ने क्रममा रेलवे ठक्कर दिएको भारतीय पत्रिका दि इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ ।उनलाई उपचारको लागि सिओन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । प्रहरीले भारतमा रहेको नेपाली समुदायलाई सम्पर्क गरी उनको नेपालको ठेगाना पत्ता लगाई उनको शव हस्तान्तरण गरेको थियो । ती युवती कामको लागि मुम्बई पुगेकी थिइन् ।...
उद्धार उडानको क्रममा अफगान महिलाले जन्माइन् बच्चा
७ भदौ, काठमाडौं । अफगानिस्तानकी एक महिलाले अमेरिकी एयरफोर्सको उद्धार उडानको क्रममा बच्चा जन्माएकी छन् । उनले अमेरिका उडानका क्रममा जर्मनीमा बच्चा जन्माएकी हुन् । बीबीसीका अनुसार आफ्नो परिवारसँग मध्यपूर्वबाट यात्रा गरिरहेका बेला ती महिलामा प्रसव पीडा सुरु भएको थियो । उनको अवस्था जटिल हुँदै गएपछि विमानका पाइलटले कम उचाइको उडान गरे ताकि विमानमा हावाको चाप बढोस् र ती महिलाको ज्यान बचाउन सहयोग होस् । युएस एयरफोर्सको सो विमान जर्मनीको रामस्टीन एयर बेसमा अवतरण हुने बित्तिकै अमेरिकी सैन्य चिकित्सकहरूको टोली आएर बच्चा जन्माउन सहयोग गरेको थियो । आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो रहेको र उनीहरू नजिकैको अस्पतालमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।...
पोखराको महेन्द्र पुल नजिकको सडक भासियो
७ भदौ, पोखरा । कास्कीको पोखरास्थित महेन्द्रपुल सेलवेज गेटको पारी, गरिमा विकास बैंक अगाडिको सडक भासिएर भ्वाङ परेको छ । पोखरामा पानी परिरहेका बखत जमिन भासिएर भ्वाङ परेको हो । भ्वाङमा एउटा बिजुलीको पोल पनि परेको छ । नालाको मुख, पालिखे चोक हुँदै पानी पर्दा खोलाजस्तै भेल महेन्द्रपुलमै आइपुग्छ । त्यो भलले सडकसमेत भत्काउने गरेको छ । आइतबार राति भ्वाङ नै परेपछि महेन्द्रपुल क्षेत्रका मानिस त्रसित बनेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी सुवास हमालका अनुसार पानीको भल त्यही भ्वाङबाट छिर्दा जोखिम बढेको छ । ‘पानी परिरहेको छ र पानीको भल त्यसैबाट छिरिरहँदा अझै भासिने र महेन्द्रपुल क्षेत्रमा क्षति पुग्ने हो कि भन्ने डर छ’ उनले भने । अहिले भल तर्काउने र ढुंगा ल्याएर भ्वाङ पुर्ने काम जारी रहेको तर पानीले अवरोध गरिरहेको उनले बताए । पोखरामा बेला मौकामा यस्ता भ्वाङ देखिन...
Aug222021 by adminNo Comments
तालिबानबाट प्रयोगकर्तालाई जोगाउन फेसबुक, ट्वीटर र लिंक्डइनले गर्दैछन् यी ६ काम
तालिबानले अफगानिस्तानमा नाटकीय रुपमा कब्जा जमाएसँगै धेरै अफगानीहरु आफ्नो विगतको डिजिटल फुटप्रिन्ट मेटाउने प्रयासमा छन् । आफ्नो विगतको अनलाइन गतिविधिका आधारमा तालिवानले बदला लिन्छ कि भन्ने मान्छेहरुलाई त्रास छ । मानव अधिकारवादी समूहहरुले पनि अफगानी नागरिकहरुको डिजिटल इतिहास तथा सामाजिक सम्बन्धहरु ट्रयाक गर्नका लागि तालिवानले सोसल मिडिया प्लाटर्फमहको उपयोग गर्नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यहीँ चासो तथा खतरलाई मध्यनजर गर्दै फेसबुक, ट्वीटर तथा लिंक्डइनले अफगानी प्रयोगकर्ताहरुलाई तालिवानाबाट बचाउनका लागि महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । आखिर यी सोसल मिडियाहरुले अफगानी प्रयोगकर्ताका अकाउन्टलाई सुरक्षित बनाइदिएर कसरी तालिवानको सम्भावित खतराबाट जोगाइदिंदै छन् त ? यी हुन् सोसल मिडिया कम्पनीले उठाएका ६ कदम : १. फ्रेण्ड लिस्ट हेर्ने तथा सर्च गर्न नसक्ने बनाउनु : फेसबुकले अफगानिस्तानमा ...
अमेरिकाले भन्यो– अफगानिस्तानमा आईएसको आक्रमण हुनसक्छ, सुरक्षित रहनू
७ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेट आईएस समूहले आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । शनिबार सुरक्षा अलर्ट जारी गर्दै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरुलाई आईएसको सम्भावित आक्रमणबाट जोगिन भनेको हो । आईएसको सम्भावित आक्रमणबारे अधिक जानकारी भने दिइएको छैन । आईएसले पनि आक्रमणको धम्की दिएको सार्वजनिक भएको छैन । तर अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरुले भने आफ्ना नागरिकलाई ‘ढोका बाहिर हुन सक्ने सुरक्षा खतरा’बाट आफूलाई टाढै राख्न र सुरक्षित रहन भनेको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले अफगानिस्तानको स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएका छन् । राजधानी काबुलस्थित विमानस्थल बाहिर आतंक जारी रहेका बेला अमेरिकाले सम्भावित आक्रमणको खतराबारे जानकारी गराएको हो । विमानस्थलबाहिर एक जर्मन नागरिकमाथि गोली प्रहार भएको थियो । अमेरिकाले विमानस्थलबाहिरको भिडभाडमा नजान भनेको छ । एक हप्ता अगाडि तालिब...
माओवादीसँग एकता नगरेको भए एमाले ५० सिटमा खुम्चन्थ्यो : राजेन्द्र पाण्डे
५ भदौ, काठमाडौं । प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गत निर्वाचनमा माओवादीसँग एकता नगरेको भए एमाले ५० सिटमा खुम्चने बताएका छन् । पार्टी विभाजनपछि शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको युवा संगठन धादिङको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डले माओवादीसँग एकतापछि मात्रै एमाले अहिलेको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । माओवादीसँग एकता भएर नेकपा नबनेको भए एमाले ५० सिटमा खुम्चन्थ्यो,’ उनले भने, ‘माओवादीसँगको एकतापश्चात मात्र प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट र समानुपातिकसहित १२१ सिट जित्न सफल भएका हौं ।‘ नेता पाण्डेले भने, ‘पार्टी एकताबाट नै थप शक्तिशाली बनेको तथ्य ओलीले कहिल्यै महसुस गरेनन् ।’ एउटा गुटको मात्रै नेतृत्व गरेर मनोगत ढंगले पार्टी चलाउँदा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुगेको उनको तर्क थियो । नेता पाण्डेले एमाले अध्यक्ष ओली नेप...
बोरुसिया डर्टमण्ड फ्रेइवर्गसँग डर्टमण्ड पराजित
६ भदौ, काठमाडौं । जर्मन बुण्डेसलिगामा बोरुसिया डर्टमण्ड फ्रेइवर्गसँग २-१ ले पराजित भएको छ । डर्टमण्ड सिजनको दोस्रो खेलमै पराजित भएको हो । फ्रेइवर्गले घरेलु मैदानमा जित हात पार्दा भिनसेन्जो ग्रिफोले छैटौं र रोलान्ड सालाईले ५३औं मिनेटमा गोल गरे । फ्रेइवर्गक यानिक केइटलले ५९औं नेटमा आत्मघाती गोल डर्टमण्डलाई उपहार दिएका थिए । लिगमा फ्रेइवर्गको यो पहिलो जित हो । यसअघि पहिलो खेलमा फ्रेइवर्गले बराबरी खेलेको थियो । ४ अंकसहित फ्रेइवर्ग तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ भने तीन अंक रहेको डर्टमण्ड छैटौं स्थानमा झरेको छ । यस्तै लगातार दोस्रो जित हात पारेको वल्फ्सवर्ग ६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । वफ्स्वर्गल हेर्थ बर्लिनलाई २-१ ले पराजित गरेको हो । अर्को खेलमा बायर लेभरकुजनले बोरुसिया मोचेनग्लाडबाकलाई ४-० ले पराजित गरेको छ । लेभरकुजन ४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ।...
साफमा हारे मेरो गल्ती, जिते श्रेय खेलाडीलाई : अलमुताइरी
५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम अहिले साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा छ । साफ अक्टोबरमा माल्दिभ्समा हुँदैछ । त्यसअघि भारतसँग सेप्टेम्बरमा घरेलु मैदानमा दुई खेल खेल्नेछ । हाल पोखरामा नेपालले तयारी गरिरहेको छ । त्यसै अवसरमा नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अबदुल्लाह अलमुताइरीले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को मिडियासँग कुरा गर्दै साफ जित्न नसके आफ्नो गल्ती हुने र जितेमा खेलाडीलाई श्रेय जाने बताए । ‘नेपालले अहिलेसम्म साफ जित्न सकेको छैन । त्यसैले साफ हाम्रा लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । तर खेलाडीलाई दबाब नदिऔं । यदि साफमा हार्‍यौं भने मेरो गल्ती हुनेछ । जित्यौ भने सबै श्रेय खेलाडीलाई जानेछ ।’ प्रशिक्षक अलमुताइरीले यसअघि पनि बारम्बार नेपालले साफ जित्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस पटक पाँच टिम मात्र सहभागी भएकोले सिंगल राउण्ड रोविन लिगपछि शीर्ष दुई टोली फाइनल पुग्नेछन् । नेपालले अहि...
५ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले महँगो भाडा तिरेर काठमाडौंमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयको औचित्यमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश १ सरकारले काठमाडौँ महाराजगञ्जमा शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन् । ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयविना काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको जनाएको हो । काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायत मालसामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । घरभाडा पनि महङ्गो छ । मासिक दुई लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गते भाडामा लिइएको घरमा १८ लाख ४२ हजारसमेत गरी ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । २०७६ सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वाषिर्क ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ...
रियल बेटिस र क्याडिजको दोस्रो बराबरी
५ भदाै, काठमाडौं । बहुँप्रतिष्ठित स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल शुक्रबार रातिबाट सुरु भएको छ । दोस्रो चरणको खेलमा रियल बेटिस र क्याडिजले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । रियल बेटिसको घरेलु मैदान बेनिटो भिल्लामारिन स्टेडियममा भएको खेलमा बेटिस र क्याडिजले १-१ काे बराबरी खेलेका हुन् । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै गोल पहिलो हाफमा सम्भव भएको थियो । खेलमा पहिले अग्रता पाहुना टोली क्याडिजले लियो । ११औं मिनेटमा अल्भारो नेग्रेडोले पेनाल्टीमार्फत गोलको खाता खोले । डिबक्सभित्र बेटिसका गोलरक्षक रुई सिल्भाले क्याडिजका एन्टोनी लोजानोलाई खराव ट्रयाकल गरेपछि क्याडिजले पेनाल्टी पाएको थियो । त्यसपछि बेटिसले २२औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्यायो । बेटिसका लागि जुआनमीले बराबरी गोल गरे । उनले इडगर गोन्जालेजको पासमा गोल गरेका थिए । बल पोसेसनमा बेटिस बलियो देखिएको थियो । ७५ प्रतिशत ...